अहिले नै सहयोग गर्नुहोस्
श्रेणी २ पुरस्कार – ने रु २००
अभियानलाई ने रु २०० सहयोग गर्नुहोस् र अभियानको विशेष स्टिकर प्राप्त गर्नुहोस् ।
अभियानको विशेष स्टिकर
श्रेणी ३ पुरस्कार – ने रु ५००
ने रु ५०० सहयोगका लागि तपाईंले हाम्रो अभियानको चुम्बक प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
श्रेणी ४ – पुरस्कार ने रु १०००
ने रु १००० का लागि हामी तपाईंलाई अभियानको सिलाउन मिल्ने स्टिकर “सिउ–अन प्याच” र अभियानको आधिकारिक डकुमेन्टरीको डाउनलोड लिंक पठाउनेछौं ।
श्रेणी ५ पुरस्कार – ने रु १२००
ने रु १२०० का लागि तपाईंले अभियानको पेपरब्याक पुस्तक पाउनु हुनेछ ।
श्रेणी ६ पुरस्कार – ने रु १५००
अभियानलाई ने रु १५०० सहयोग गर्नुहोस् र अभियानको आधिकारिक टोपी पाउनुहोस् ।
अभियानको आधिकारिक टोपी
श्रेणी ७ पुरस्कार – ने रु २०००
ने रु २००० का लागि हामी तपाईंलाई अभियानको हार्डब्याक पुस्तक पठाउनेछौं ।
श्रेणी ८ पुरस्कार – ने रु २५००
अभियानलाई ने रु २५०० सहयोग गर्नुहोस् र पाउनुहोस् अभियान सम्बन्धी डकुमेन्टरीको डाउनलोड लिंक र अभियानको आधिकारिक च्यालेञ्ज कोईन (चुनौती सिक्का) ।
अभियान सम्बन्धी डकुमेन्टरीको डाउनलोड लिंक
अभियानको आधिकारिक च्यालेञ्ज कोईन
श्रेणी ९ पुरस्कार – ने रु ३०००
ने रु ३००० का लागि तपाईंले माईकल कोबोल्डद्वारा व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गरिएको अभियानको हार्डब्याक पुस्तक पाउनु हुनेछ ।
श्रेणी १० पुरस्कार — ने रु ५०००
नेपालको अभियानमा ने रु ५००० सहयोग गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई निम्नानुसारका सामग्री पठाउनेछौं
अभियानको डकुमेन्ट्रीको डाउनलोड लिंक
अभियानको आधिकारिक लक्जरी लगेज ट्याग
श्रेणी ११ पुरस्कार – ने रु ६०००
अभियानलाई ने रु ६००० सहयोग गर्नुहोस् र पाउनुहोस् व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गरिएको अभियानको हार्डब्याक पुस्तक र अभियानका आधिकारिक स्मृती चिन्हहरु
व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गरिएको अभियानको हार्डब्याक पुस्तक
श्रेणी १२ पुरस्कार — ने रु १०‚०००
ने रु १००००‚ का लागि हामी तपाईंलाई अभियानको आधिकारिक ऊनको टोपी र अभियानको डकुमेन्ट्रीको डाउनलोड लिंक पठाउनेछौं ।
अभियानको आधिकारिक ऊनको टोपी
अमेरिकी राजदूत स्कट एच. डेलिसी
वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ‚ स्कट डेलिसीले – एरिट्रिया‚ नेपाल र युगान्डाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतका रुपमा तीन पटक कार्यभार सम्हालेका छन् । राजदूत डेलिसी सन् २०१० मा अभियान आरम्भ भएदेखि नै संलग्न छन् ।
चालीस वर्ष अघि‚ सर एडमन्ड हिलारीले रसेललाई नेपाल भ्रमणमा साथै हिड्न निमन्त्रण गरेका थिए । रसेलले डिस्कभरी च्यानलको एभरेष्ट श्रृंखलामा काम गरेका छन् र अभियानको सह–नेतृत्व पनि सम्हालेका छन् ।
चलचित्र तथा टेलिभिजनका चर्चित अभिनेता माल्कोम म्याकडावल आधा शताब्दीदेखि हलिवुडको ठूला स्टार हुन् । सन् २०१५ मा नेपालमा दुई पटक जानुअघि देखि नै माल्कोम अभियानमा प्रतिबद्ध छन् ।
माईकल ईम्पेरियोली चर्चित कलाकार हुन् र अभियान अघि नै उनले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् ।
स्कट हलिवुडको बहुमुखी चरित्र अभिनेता हुन् र द हन्ट फर रेड अक्टोबर‚ डब्ल्यु‚ द साईलेन्स अफ द ल्याम्ब्स लगायत जेसन बोर्नको तीन वटै संस्करणमा सशक्त अभिनयको लागि विश्वप्रसिद्ध छन् । पूर्व अमेरिकी मरिन ग्लेनले विपत्तीसँग लड्न सिकेका छन् ।
नुनो जीवित ईतिहास हुन् । रक ब्यान्ड “एक्स्ट्रिम” को नेतृत्व गरेका नुनो विश्वकै ख्यातीप्राप्त गितारवादक हुन् ।
मनिषा बलिवुडकी एक चम्किला तारा हुन् । नेपाली मूलकी मनिषा जति आकर्षक र विवेकी छिन् त्यति नै दृढ पनि छिन् : उनले डिम्बाशयको क्यान्सरलाई पराजित गरेकी छिन् र हिमालयको काखमा एउटा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने तयारीमा लागेकी छिन् ।
नेपाल र बलिवुडका ख्यातिप्राप्त अभिनेता सुनिलको हँसिलो स्वभाव उनले प्राय निर्वाह गर्ने रवाफिलो भूमिका विपरीत छ ।
सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्प जानु अघिदेखि नै अभियानप्रति प्रतिबद्ध‚ र्‍यानको ढाडको चोट समयमै निको भए सेलेब्रेटी चालकका रुपमा सहभागी हुनेछन् ।
विश्वकै सफल र चर्चित पर्वतारोही राइनहोल्ड अभियानको सेलेब्रेटी चालकको आदर्श उम्मेदवार हुन योग्य छन् ।
अभिनेत्री तथा पूर्व मिस नेपाल समेत रही सृष्टी श्रेष्ठ सन् २०१५ को भूकम्प अघिदेखि नै अभियानमा संलग्न छिन् ।
हाम्रो समयको अत्यधिक प्रशंसित फोटोग्राफर मार्टिनका फोटोहरु नेशनल जियोग्राफिकका पुस्तक र म्यागजिनहरुमा प्रकाशित र प्रसारित भएका छन् ।
सडक यात्रा ? संगीतको सूची ? नेपालको सबैभन्दा ठूलो रक ब्यान्ड‚ १९७४ एडी‚ का सदस्यहरु पनि काठमाडौंसम्म दमकल चलाउँदै पुग्नेछन् ।